Ukuphupha ityhuna Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ityhuna ifumaneka ekhaya kuzo zonke iilwandle zomhlaba kwaye ikwabizwa ngokuba yi "torpedo" ngenxa yesantya sayo. Isantya esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-90 km / h, ityhuna ikwahamba imigama emide emanzini, ubukhulu becala ngenxa yomzimba omile okokuluka.
Olu hlobo lweentlanzi luyintlanzi efudukayo kwaye luyakuthanda ukuhlala, kungoko kunokwenzeka ukuba lufumaneke ngaphezulu kwamanzi kwizikolo ezincinci. Nangona kunjalo, ityhuna ichitha ixesha elibandayo kubunzulu obukhulu obufikelela kwiimitha ezili-180. UMackerel yenye yezihlobo zetyhuna.
I-Tuna inokufikelela kubungakanani bomzimba. Iintlanzi ezizingelayo zikhula ziye kubukhulu benye ukuya ngaphezulu kweemitha ezine kwaye zinobunzima obuyi-700 kilos. I-Tuna yenye yezona ntlanzi zithandwayo kweli lizwe kwaye apho yayikhe yayonwatyelwa ikakhulu njenge-tuna esenkonkxiweyo, ngoku iyathandwa njengetyhuna yetyhuna esandula ukwenziwa okanye esetyenziweyo kwi-sushi nakwi-sashami.
Utoliko lwamaphupha lulujonga njani uphawu lwephupha "ityhuna"? Kuthetha ntoni xa ushukuma ngamaphupha akho?
1 Uphawu lwephupha «ityhuna» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ityhuna» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ityhuna» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ityhuna» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lamaphupha, isimboli yephupha "ityhuna" ithetha esperanza kunye nekamva eliqinisekileyo. Ukuba ubamba yonke ityhuna enkulu ephupheni, oku kukunika ithemba lokufumana izivumelwano ezilungileyo kakhulu zezemali. Ukuba, ngokuchaseneyo, zimbalwa ii-tunas kumnatha, oku kuxela amaxesha okuxhalabisa abaphuphi.
Ukuba uyitya ityhuna, oku kuyinyani kwimicimbi yexesha elizayo kwaye kuyenza icace iphupha lokuba unokuba nethemba lokuba yonke into izakwenzeka ngendlela afuna ngayo. Nangona kunjalo, ukuginya amathambo kwinkqubo kufuna ulumkiso ebomini bokuvuka, njengoko kunokubakho abantu kwindalo esingcatshayo ukuze sifumane elona thuba libalaseleyo.
Ukuba umntu uphupha ukutya ityhuna, mthembise oku Suerte kwisini sabasetyhini. Iphupha le-tuna lazisa kumfazi osemncinci ukudibana nendoda enomtsalane kwaye ethetha kakuhle. Ukuba owasetyhini okhulelweyo unamaphupha etyhuna kwaye uyasitya esi silwanyana ngolonwabo, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, unokulindela ukuhanjiswa ngokulula.
Uphawu lwephupha «ityhuna» - ukutolikwa kwengqondo
I-Tuna ikwaluphawu lwangaphakathi kuhlalutyo lwamaphupha, njengeentlanzi ngokubanzi. Ijongana neendawo ezingazi nto kwaye uziqonda kwinqanaba lokuqonda. Ukuba ubona isikolo setyhuna kumava akho ephupha, kuya kufuneka uyazi iimvakalelo ozivayo.
Ngaba uye wadada phakathi kweentlanzi ngokwakho kwaye waziva uyinxalenye yoluntu lokuqubha, okanye wazibona ulilizwe? Kwezinye iinkcubeko, intlanzi ithathwa njengophawu lobudoda kwaye idluliselwe ekutolikeni kwephupha, ukubonakala kwetyhuna kunokuba ikhoyo. Ndiziva ndibanda bonisa kwiintlobano zesini.
Ukubona ityhuna yokuqubha emanzini akhazimlayo kungqina imeko yovuyo kunye nokulinganisela kwengqondo yomntu ophuphayo.
Ukuba ityhuna ilele emhlabeni el mundo Ukusuka emaphupheni, la mava ephupha abonisa uloyiko lokungazi nto ngokuphupha ngokungazalisekiswa kweminqweno namaphupha akho.
Uphawu lwephupha «ityhuna» - ukutolika kokomoya
I-Tuna ifumaneka kutoliko lwamaphupha okomoya njengophawu lwe amandla okomoya kunye nobunzulu bomphefumlo.